Moobaylka waa been abuurtay in uu saameyn weyn ku maanta si noloshooda maalin. Technology gacanta ayaa si buuxda u beddeli lahayn ku socono. Our telefoonada gacanta ayaa lagu badalay naga iPod, buugaagta, boorsooyinka, kaamirooyinka iyo si ka badan. Waxa ay u muuqataa sida jiro codsiga wax kale oo kasta oo haatan, waxaana socon kartaa mid ah dhammaan hawlaha ku saabsan qalab hal in ay geli karaan goobo our. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah kacdoonka oo waaweyn oo qalab waxa uu keenay in nolosheena waxaa la dhimayaa farqiga isgaadhsiinta. SMS ama fariimaha qoraalka ayaa shaki la'aan noqday mid ka mid ah noocyada ugu haboon ee isgaarsiinta. Hoos waxaan ka hadli doonaa 10ka websites kaas oo awood u noo soo dir sms free online dumaya.
Wondershare MobileGo - Maamul iPhone iyo Farriimihiisa Android
Shimbir Message waa Fariin forum online in sms diri online, ay isticmaalaan noocyada keentay badan sida Dominos, IKEA, TNW, iyo Laawi ee iwm Waxaad waxaa looga baahan yahay inuu saxiixo internetka si ay u isticmaalaan adeegyada. Waxa ay leeyihiin siyaasado binta kala duwan ee macaamiisha kala duwan oo ku salaysan ay doorashada oo ka mid ah baakadaha bixiyo. Waxay sidoo kale bixiyaan tijaabo ah oo lacag la'aan ah iyo in la siiyo fursado kala duwan.
Website-kani waa gaar ah faa'iido u dadka maareynta ganacsiga iyo u baahan tahay si ay u gaaraan macaamiisha badan oo isku mar ah.
Messagebird sidoo kale waxay bixisaa adeegyo ah ee suuq mobile, SMS hadalka oo Email si beddelaad SMS.
Messagebird bixisaa dhamaystiran online xal fariin shirkadaha iyo ganacsatada laakiin waxaa aad u ma doonteen caga wada hadalka aan joogtada ahayn.
SS Infos asal ahaan waa hay'adda advertising online oo lagu daro adeegyada ay advertising iyo suuq-geynta waxa ay sidoo kale bixisaa adeegga si aad sms u soo diri online. Sida Messagebird, SS Infos waa ganacsi internetka ku salaysan madal SMS ah.
Waxay luuqeeyo ee bixinta adeegyada ah SMS Dhiirrigelineed, SMS ciddaa oo ku baaqay Voice.
Waxay sidoo kale bixiyaan Albaabo SMS badan u dhexgeliyo bogaga internetka, gaadhi shopping online, xal bangiyada iyo baraha internet-ka.
Adeegyada ay bixiyaan infos SS ma aha oo gebi ahaanba bilaash ah oo ah qiimaha iyo aad ayaa looga baahan yahay si loogu bixiyo tirada credits SMS.
Lacagta, isticmaalka adeegyada, waxaa loo baahan yahay in la sameeyo ka hor iyo soo celiyo aan la sameeyey haddii aad hadhay wixii lambarada credit aan la isticmaalin.
160by2 waa website si ballaadhan loo isticmaalaa in lagu soo dir SMS Free Unlimited. Boggan waxaa loo isticmaali karaa in dalal kala duwan sida Kuwait, Hindiya, UAE, Singapore, Filibiin iyo Malaysia. Goobta waxay u baahan tahay xisaab user a iyo lambarka telefoonka aad si xiriirada aad la beehsa kartaa xisaabtaada online website-ka oo aad si fudud u la xiriiri kartaa dadka in liiska xiriirada aad.
Faa'iidada aasaasiga ah ee website-kan waa in ay tahay mid aad u fududahay in la isticmaalo iyo shaqsi aqoon farsamo xitaa yar eegi kartaa iyada oo goobta.
Waxaa intaa dheer, waa hawl dalal kala duwan, sida kor ku xusan.
Faa'iida ee website-kan waa in aysan ogolaan Fariin caalamiga ah.
Waxaan aad weli website kale ka halkaas oo aad si fudud u soo diri kartaa fariimaha qoraalka ah internetka ah bandhigo. Adeeggu waa mid dhakhso iyo kalsoonaan karo oo fariin qoraal ah oo lagu soo gudbin karaa, si ay u socoto la doonayo, 10 seconds gudahood.
Waxay bixisaa fariimo free aan xad lahayn iyo fursadaha of chat SMS group.
Waxa kale oo aad astaysto CHAT aad soo degsado wallpapers ama fariin ah oo caan ah goobta u doortay inuu u diro aad xiriirka la leedahay.
Adeeggu waa mid aad u degdeg ah.
Faa'iida ee website-kan functional kala duwan waa in adeegyada website-kan waxa kaliya ku koobnayn Hindiya.
Intaa waxaa dheer inuu yahay website ah, ICQ ayaa sidoo kale isku bedelay codsi mobile oo ay taageerayaan Android iyo macruufka software. Adeeggu waa mid aad loo jecel yahay ka mid ah da 'yarta ay sabab u tahay helitaanka fudud iyo adeegyada kharash yar.
ICQ kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto fariimaha qoraalka ah oo lacag la'aan ah caalamka.
Waxay bixisaa adeegyo dheeraad ah sida wacitaanada cod iyo video.
Si aad fariin aad ka sii madadaalo, waxaa jira kala duwan oo ka mid ah stickers aad u dooratay karaa in ay u diraan oo fariin qoraal aad.
Waxaa ay taageerayaan teknoolajiyada software gacanta kala duwan sida Android iyo macruufka.
Qaar ka mid ah adeegyada ay bixiso ICQ aan waa lacag la'aan.
Skebby waa codsi telefoon kale website gacanta Jochen in kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto farriimaha qoraalka dagdag ah caalamka. Skebby waa u fududahay in la isticmaalo, sababtoo ah ma uusan u baahan tahay wax diiwaangelinta ama account login oo aad si fudud in telefoon kasta oo mobile diri kartaa farriin qoraal ah meel kasta oo dunida ah. Laakiin haddii aad dooneyso in aad diiwaan sheekaysiga hore ama helaan farriimaha markaas u baahnaan doontaa inaad saxiixdo xisaabta lacag la'aan ah Skebby.
Waxa kale oo ay bixisaa adeegyada SMS Marketing iyo Advertising.
No account is diiwaangelinta waxaa loo baahan yahay in baaq loo diro ka.
Heli kartaa fariimaha via Skebby sidoo.
Website waa user-friendly oo u fudud in ay maraan.
Waxaa lagaaga baahan yahay in la sameeyo account si ay u diiwaan taariikhdaada hore chat ama in ay isticmaalaan adeegyada caymiska.
Yakedi weli waa website kale oo aad bixisaa adeeg ee fariimaha qoraalka online lacag la'aan ah. Waxaa laga yaabaa inaad raacdo 2 talaabooyin fudud ka hor inta aadan soo diri kartaa tirada xad lahayn ee fariimaha qoraalka ah oo lacag la'aan ah.
Waa arrin aad u fudud in ay maraan oo waa user-friendly.
Waxaa loo baahan macluumaad login ugu yar.
Diiwaangelinta account waa lacag la'aan.
Taasina waxay noqon kartaa in website-kan ma bixiso adeeg kasta oo kale oo ay la socdaan fariimaha qoraalka.
Haddii aad raadinayso madadaalada xirmo dhamaystiran oo ay la socoto adeeg fariin online lacag la'aan ah, SMSfi waa barta saxda ah ee aad u. Waxa intaa dheer in la siinayo adeega SMS free website uu leeyahay waxyaalo badan oo xiiso leh in ay bixiyaan. Waxay leedahay gaar ah kaararka salaan iyo stickers qaybta si wada hadallada sii noole iyo shakhsi. Waxaa intaa dheer in, waxa ay leedahay qaybta u ah cuntada cunto iyo macluumaadka la xiriira. Adeegga internetka ayaa sidoo kale waxay bixisaa ikhtiyaar u duuban wallpapers.
Waxaad jeclaan doonaa website-ka haddii aad raadinayso website fudud oo madadaalo u diraya SMS online.
Website-kani ma aha haddii aad raadinayso website qaar ka mid xirfadeed kaas oo bixiya adeeg suuq-geynta iyo xayeysiinta mobile si loogu isticmaalo ganacsi.
Tani waa website kale ha aad SMS caalamka diro. Waxaana ay ku aaddan in inta badan gobollada ay ka mid yihiin North America, South America, Europe, Asia iyo Africa. Intaas waxaa sii dheer, website waxay u baahan tahay oo sidaas daraaddeed ma diiwaangelinta waxaa aad u sahlan in ay isticmaalaan. All inaad samayso waa qorto fariin, waxay bixiyaan macluumaad aqbalana iyo aad fariin loo soo diray in ay caga doonayo. In kastoo ay ku aaddan tahay kasta qayb ka mid ah adduunka oo ka dhigaysa nidaamka ee SMS diraya caalami ah mid aad u fudud aysan u bixisaa wax adeegyo kale sida fariimaha Jumlada ama Mobile Suuq iwm
Wuxuu daboolaa kasta qayb ka mid ah adduunka oo ay ku bixisaa adeegyo gobol kasta.
Diiwaangelinta No ayaa loo baahan yahay
Dhinto oo aan siin wax adeegyo dheeraad ah oo aanu sidaas daraaddeed waa inaad qoraal, waa website weyn u isticmaalka joogtada ahayn laakiin aan si habboon in loo isticmaalo ganacsi.
YouMint waxay bixisaa adeegyo kala duwan, marka lagu daro diraya SMS oo bilaash ah iyo fariimaha qoraalka ah, hoos ku hal madal. Bogga internetka waxa aad ka diiwaan gelin kartaa cinwaano dhowr ah, sida Facebook, Google iwm, oo waafajinta doonaa xisaab oo dhan iyo macluumaadka xiriirka ee ku jira iyaga oo ku. Waxa kale oo ay bixisaa boosteejo ah oo shopping online.
Waxay bixisaa boosteejo ah oo shopping online oo ay lacag abaal users iyo qiimo dhimis ku siinayaa.
Waafajinta macluumaadka ku jira xisaabaadka badan iyo waxa laga heli karaa ka dhigaysa hal madal
Website yahay oo keliya shaqeeya Hindiya
> Resource > Top List > Top 10 SMS Shabakadaha Free u soo dirto SMS Online